China Roman Mapofu Kunze uye Kambani | ETEX
Roman Mapofu akafuridzirwa neakapfava ekupa machira ayo anowedzera kupfava uye kudziya kunzwa kwemavara emucheka emakamuri.
● Sistimu: Cord / Wand Kudzora System
● Muenzaniso: Pini, Jacquard, Flocking, Blackout, Translucent, Sheer, machira emoto-chiratidzo
● Mucheka: Kusona rudzi rwekucheka mhando
● Chidziviriro chekuchengetedza mapofu ega ega
Akasviba roman blinds anopfekedza windows ako nekunaka kunhuvira. Kunyangwe iwe uchida maitiro echinyakare yekicheni, kana yamaruva yakarongedzwa roman blinds kuimba yekutandarira, Yakanakira kudzora zuva kana iwe uchida, mapofu erudo ari nyore kushandisa uye anoyevedza. Ingo dhonza tambo yekugadzirisa machira mapofu kusvika pakukwira iwe kwaunoda kuti windows yako ibvumidze mapofu ako eromani kuti agadzire zvichemo zvechion nekutarisa kusingaperi. Mapofu eRoma akakodzera kune rakasiyana rekuisa. Gadzira kutaridzika kweMedhia nehuwandu hwedu hwekamuri roman blinds, kana gadzira nzvimbo yepamuri mumba mako yekugara nemapofu emaruva emahwindo e bay.
Roman Mapofu anofarirwa kushandisa mukushongedza kwemba, hofisi, hotera, kofi, furawa uye nzvimbo zhinji dzeveruzhinji. Isu tinokwanisa kugadzira senge maererano nehukuru hwesarudzo dzakasiyana dzemusika.
Mapofu eRoma ari nyore kuisa, nyore kuchengetedza, kushambidzika, saka zviri nyore kuchenesa.
Anoshanda emapofu mapofu haafanire kuve akajeka uye akapusa. Isu tinopa vatema mapundu ezve romanan anouya mumachira akasiyana-siyana nemitsetse uye mapatani kuti afananidze neyako iripo décor. Chinhu chakanakisa maketeni, mapofu edu erudo mabhuruku anowaridza hwaro hwakakora kuti kunze kuve nechiedza kana iwe uchida uye nekupa imwe yakawedzerwa yekuisa, kukuchengeta wakakamira pamubhedha kwenguva refu kana iwe uchida imwe yekuvhara-ziso.
Mapofu eRoma mune rakasiyana-siyana ruvara kusanganisira chena, grey, tsvuku, pink, bhuruu, girini, kirimu, zvakasikwa uye nezvimwe. Chero machira evatengi anogona kuve akagadzirwa mukusuka kwedu looms nemhando yekushandisa machira ekushandisa.
Yepfuura: Readymade Zebra Bofu
Inotevera: Britain Vertical Zvipenga